Nusdanbeedka Muuse Biixi Ee Cagaha Haya Horumarinta Xukumada Siilaanyo
Waxaa beryahanba soo badanayay kala duwanaanshiyaha aragtida horumarka ee xukumada somaliland qadaysay iyo xisbigeda kulmiye
Xukumada kulmiye ayaa waxay beryahanba ku hawlanayd sidii ay horumarka dalka ugu heli lahayd maalgelin shisheeye tan iyo sanadii2014 kii waxay cilaaqadyo iyo heeshiisyo kala duwan la galaysay dawlada Imarad ka iyo kuwait siyay maalgelin caalamiya ugu hesho horumarka dalka sida dekeda berbera iyo airportka milatari ee berbera.
Hadaba talaabooyinkaa waxaa aad ugu kala aragti duwanaday asxabta mucaradaka qaar ka mida iyo waliba xisbiga kulmiye oo aad moodo inaanay la dhacsanayn talaaboyinka xukumadu qadayso siiba waxaad modaa in xisbiga kulmiye kooxda ugu tunka wayn ee musharax muuse biixi ay aad u dhaliilsanyihiin heshiiskii ay saldhiga
milatari ee parlamanka somaliland codka aqlabiyada ku meel mariyeen.
Waxaa jira koox awood badan oo qalin lay aha oo kartirsan musdanbeedka xisbiga kulmiye inay dhinaca social media ka wadaan kacdoon ka soo horjeeda base garaynta heshiiiska saldhiga milatari iyo kii shirkada DP world ba kooxdan ayaa ah koox badankoodu ka so guuray qurbaha siyay u noqdaan kaatirinta xisbiga kulmiye ee jaan gooya siyaasada gudoomiye muse biixi.
Kooxdaas ayaa waxa ay weerarakoda ku adeegsadaan ay xukumada kaga so horjedaan heshiisyada calamiga xaga qalinka iyo suugaanta iyo waliba clip yo ay ku baahiyana barahoda social media .
Wakhtiyadan danbe waxaad dareemaysaa kala jab ka bilowday xisbiga kulmiye oo bahwadaag lagu yaqaanay oo ay kooxdaasi sababsadeen waxaad modaa cududii siyaasadeed iyo taagero ee xisbiga kulmiye lahaa in uu manta ukala safan yahay laba garab oo kala raacsan kulmiya muuse biixi musharax u yahay iyo kulmiyaha xukuumada taabacsan ee ahaa kulmiyihii 2010 kii madaxwayne siilaanyo taabacsana oo iminkana la aragti ah xukumada.
Hadaba waxaad modaa inuu dhaboobay halhayskii ahaa kulmiye isagaa mucarad isugu filan waxaa kaloo aad loo dhaliilayaa ka gaabsananta uu ka amusan yahay waxan dhacaaya gudoomiya ahna musharxa xisbiga kulmiye muuse biixi tafaraaruqan ka jira xisbigisa iyo xukumada.
Waxaa la ogyahay in ay gabogabo tahay xili dhamaadkii xukumada siilaanyo hadaba maxaa uu noqon doona ama wakhti intee leeg ayay qadandoontaa in uu musharaxx muuse biixi u helo xal aragtidan cakiran ee soo kala dhex gashay taageerayaashi xisbiga iyo xukumada?
Waa sual jawaabtedu ay dultaal gudoomiye muuse biixi inuu soo celiyo gaashaanbuurtii iyo cududiii uu lahaa xisbiga kulmiye yadoo lagu jiro xili kala guura.
Dhamaad Khadar Shaam Saleban Birreere